Akwụsịre ọgwụ Moderna COVID-19 na Japan mgbe ọnwụ abụọ gachara
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Japan » Akwụsịre ọgwụ Moderna COVID-19 na Japan mgbe ọnwụ abụọ gachara
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Akụkọ na -agbasa ozi Japan • News • Safety • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ministri ahụike na Japan ekwenyela na mmadụ abụọ ejiri ọgwụ mgbochi site na ọgwụ were gbaa ọgwụ mgbochi anwụọla.
A hụrụ ihe ndị mba ọzọ n'ọtụtụ ọgwụ mgbochi.
Gọọmentị Japan chọpụtara mmetọ ahụ na ngwụsị izu.
Moderna kwuru na mmetọ nwere ike ịbụ n'ihi nrụpụta nrụpụta na otu ahịrị mmepụta.
Gọọmentị Japan akwụsịla iji ọgwụ mgbochi Moderna COVID-19, na-esochi ọnwụ mmadụ abụọ nwụrụ mgbe ha nwesịrị mgbọ sitere n'ihe ndị ọrụ Japan na-ekwu.
Ọtụtụ nde doses nke Moderna COVID-19 amachibidola mgbe achọpụtara ihe ndị mba ọzọ n'ọtụtụ.
Ndị ọrụ ahụike Japan chọtara mmetọ ahụ na ngwụsị izu n'ime akụkụ Oge a Ọgwụ COVID-19 na mpaghara Gunma, nke dị nso na Tokyo, na-amanye ndị isi ka ha kwụsị ịgba ọgwụ mgbochi nwa oge.
Mkpebi ịkwụsịtụ ngụkọta nde 2.6 nke ọgwụ Ogwu ogwu Moderna na -abịa mgbe a kwụsịrị nde nde 1.63 n'izu gara aga mgbe achọpụtara mmetọ na vial ụfọdụ n'ime otu ebugara ihe karịrị ogige ịgba ọgwụ mgbochi 860 n'ofe mba ahụ.
Ọ bụ ezie na ekwenyeghị na isi mmalite mmetọ ahụ, Moderna na ụlọ ọrụ ọgwụ Rovi, nke na -emepụta ọgwụ Moderna, kwuru na ọ nwere ike ịbụ n'ihi nrụpụta nrụpụta na otu ahịrị mmepụta, karịa ihe ọ bụla gbasara.
JapanMinistri ahụike ekwuputala na mmadụ abụọ e ji ọgwụ mgbochi were gbaa ọgwụ mgbochi anwụọla. Agbanyeghị, ihe kpatara ọnwụ na ikpe abụọ a na -enyocha ya na ndị isi na -ekwu na achọpụtabeghị nchegbu nchekwa. Na nkwupụta, Moderna na onye nkesa Japan Takeda kwuru na "anyị enweghị ihe akaebe ọ bụla na ọgwụ mgbochi Moderna COVID-19 kpatara ọnwụ ndị a."
Gunma ugbu a bụ mpaghara Japan nke asaa na -achọpụta ihe mmetọ na ọgwụ mgbochi Moderna, mgbe ụdị ihe a mere na Aichi, Gifu, Ibaraki, Okinawa, Saitama na Tokyo. Ọ na-abịa ka Japan na-alụ ọgụ maka ọrịa COVID-19 nke kpaliri ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara mpaghara mpaghara ọnọdụ mberede.
Kemgbe mmalite oria ojoo a, Japan edeela ikpe nde 1.38 ekwenyela na COVID-19 na ọnwụ 15,797 sitere na nje ahụ. Ruo ugbu a, ndị ọrụ Japan enyela ọgwụ mgbochi ọgwụ COVID-118,310,106.